KAOMPOSTA SY SARIBAO BOZAKA : Afa-po ny mpiofana · déliremadagascar
Mora voaray ny lesona ary mora hay ny fampiarana
Rabenantenaina Solofosoa José, Mpiandraikitra ny tontolo iainana ao amy ny Akany Avoko (FFPM) Ambohidratrimo no nisahana ny fampianarana (teôria sy pratika). Ny fikendren’ny FFPM amin’io fiofanana io dia zava-droa loha: ny fitsinjovana ny tsy fahapotehan’ny ala amy fitrandrahana harina (charbon de bois), ary koa ny fitsinjovana ny tetibolan’ny isan-tokantrano hihamaivana amy fividianana saribao fampiasa andavanandro. Voafehin’ireo mpiofana avy hatrany ny lesona nomena tambony latabatra raha vao nirotsaka nanao pratika. Ankoatra ireo avy eto an-drenivohitra sy manodidina akaiky, dia nisy avy lavitra raha nandre ny fanasana tamy ny onjam-peo. Vehivavy roa nandeha moto avy any Miarinarivo, ary lehilahy manana fahasembanana iray nandeha an-tongotra sy bisikileta avy any Ambohitompoina namonjy an’Antanifotsy haka taxi-brousse ho aty an-drenivohitra.
Satria afaka 15 andro vao ho masaka ny kaomposta narafitra, koa dia navela ho ampiasain’ny FOFIKRI FFPM Ilafy izany. Ny saribao bozaka vokatry ny fampiarana kosa dia samy nitondra mody ny mpiofana.
Rabenantenaina Solofosoa José, Resp. Environnement Akany Avoko
Afa-po ny mpiofana tamy fanazavana
Miandahy miambavy nirotsaka nanao pratika
Avadika ny kaomposta afaka 15 andro
Toy izao kosa ny lavaka famoronana “carbone”
Ahilika anaty lavaka ny ravina may
Afangaro sy volavolaina ary terena ahazoana ny vainga ilaina
Izao no vokatra azo, maina afaka roa andro dia azo ampiasaina
Afa-po ny olona manana fahasembanana avy any Ambohitompoina
Handeha hody ny androtr’io ihany ny avy any Miarinarivo
Sary: Razaka Oliva